Ọnụ ego nnukwu ihe nkiri PO China na mkpuchi mkpuchi Gothic Ụdị Agriculture Multi-span Greenhouse With Rolling Table-PMG002 factory and suppliers | Aixiang
Glass griin haus
1-Mgbasa ozi ọkụ karịrị 90%.
2-Ọ nwere arụmọrụ mkpuchi ọkụ dị elu, ọ dabara adaba maka ụfọdụ ngwaahịa chọrọ mkpuchi mkpuchi ma nwee nnukwu uru.
3-Greenhouse nwere ọmarịcha ọgbara ọhụrụ na nke ọhụrụ, usoro siri ike.
4-Ọ nwere ike iguzogide oke snow siri ike/siri ike, dịkwa mfe nhicha na idobe ya.
5-Oge ndụ nke isi ụlọ griin haus karịrị afọ 20.
Ihe Ọkụ na -ekpo ọkụ kpaliri nchara na zinc kpuchie 275gsm
Uru Mgbasa ozi dị elu na ọbụna ọkụ, ogologo ndụ na oke ike
Strong corrosion eguzogide na ọkụ na -eguzogide
Ezigbo ihe mkpuchi mkpuchi ọkụ.
Modern na mara imewe
Ibu ikuku 0.5KN/m2
Ibu snow 0.35KN/m2
Max.gbapụta ike mmiri 120mm/h (nkeji ise kwa oge)
Greenhouse na ikike ibu ibu griin haus na mbụ ibu ibu
Ihe mkpuchi Greenhouse Ulo-4,5.6,8,10mm otu iko kpụrụ ọkụ
4-n'akụkụ gbara ya gburugburu: 4m+9A+4,5+6A+5 iko oghere
Griin haus jiri ogologo oge 9.6m/10.8m/12m
Griin haus eji eaves elu 2.5m-7m
Banyere AX Glass Greenhouse
Dị ka anyị niile maara, ụlọ griinụ Venlo pụtara na Netherlands na mbụ.
AX Greenhouse na -amụ ihe mgbe niile n'ụwa niile ka ọ na -etolite.
Yabụ, na 2005, anyị malitere ime ụlọ griinụ Venlo dị na China, obodo nwere gburugburu eke dị iche iche.
Anyị arụọla ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na Tibet, nke oyi na -ada na snow, na Xinjiang, nke na -ekpo ọkụ na enweghị mmiri, anyị arụkwala ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mpaghara iru mmiri na ihu igwe dị jụụ.
Ya mere, anyị achịkọtara ọtụtụ data n'ime ihe karịrị afọ 10. Data gbasara ibu data nke griin haus na osisi.
Na premise nke nzute akuku mkpa. Anyị enwetala data gbasara ihe owuwu griin haus. N'otu oge ahụ, n'okpuru njikwa gburugburu ebe obibi griin haus, anyị gbakọkwara data na -eto ihe ọkụkụ.
Njirimara: ihe na-egbochi uzuzu, nnyefe ọkụ dị elu, arụmọrụ mkpuchi dị mma, ọdịda mgbochi mmiri, ogologo ndụ
Ọkpụrụkpụ: iko dị ọkụ: 5mm/6mm/8mm/10mm/12mm.etc, // oghere oghere: 5mm+8+5mm, 5mm+12+5mm, 6mm+6+6mm, 6mm+12+6mm, wdg.
Oke okpomọkụ: Site -40 ℃ ruo -60 ℃
Nke gara aga: Galvanized Steel Frame Multi Span PE Film Greenhouse For Agriculture Ọnụ ego Dị ala Maka Osisi Akwukwo nri-PMG001
Osote: Ụlọ ọrụ dị ọnụ ala na-ekpo ọkụ China Akụ na ụba na-aba uru Ọ bara ụba/otu-Span Po/PE Film Greenhouse nwere ahịhịa na-enweghị ala iji too tomato/kukumba/trawberry/ose-PMD001
Griin haus azụmahịa
Griin haus Window
Glasshouse na griin haus
Gothic griin haus
Griin haus nke ọtụtụ
Griin haus Venlo-Glass
Glass griin haus maka akwukwo nri akuku na -ahụ ...
Factory Nye Multi-adịru Ifuru griin haus Wi ...
Ụlọ ọrụ na -emepụta maka China Easy Installa ...
Nnukwu-Nursery griin haus, Automatic Irriga ...
Galvanized Steel ụba Multi adịru Pee Film Green ...